Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley Wuxuu ka mid ahaa Mashaariicdii Gumaysiga een Hirgalin
Inkastoo Cabdi Iley shaqsi ahaantiisa uu ahaa mujrim waalid iyo waayeel midna uusan agtiisa ixtiraam ku lahayn, hadana xumaan iyo wanaag midkii lagu sheegaba wuxuu qayb ka ahaa un mashruucii gumaysiga ee cinwaankiisu ahaa – 2ba sano waa in aan kaga sifaynaa ONLF gudaha Ogadenya- oy go’aansadeen Hawlgalkii Cobolle ka dib 2007dii. Weerarkii Cobole intii ka dambaysay wuxuu xisbiga Itobiya u taliya ee TPLF istusay in ONLF uu burburin doono xukunkoda hadii aanay iska qaban. Waraaqihii sirta ahaa ee KT Meles iyo wasiirkiisii G/dhigga ee Samoro ay is-dhaafsadeen ee lagu soo daabacay Wikileaks ayay ku sheegeen inay aaminsan yihiin in ONLF ay haysato wadadii ay TPLF haysatay markay la dagaalamayeen Mingisto oo hadaanay iska qaban ay khatar ku yihiin jiritaankooda — (the GoE’s core Tigrean People’s Liberation Front (TPLF) sees in the ONLF an image of itself two decades ago when it overthrew the brutal communist Derg regime, Prime Minister Meles and his Chief of Defense Force, General Samora Yonus, consider it vital to eliminate the ONLF before this insurgent group gains wider support. ). Sidaa daraadeed waxay isla qorsheeyeen mashruuc lagula dagaalamayo ONLF ciidan ahaan, iyo siyaasad, dacaayad iyo cuna-qabatayn dhaqaale.
Dhamaan hawluhuu fulinayay ama lagu fulinayay Cabdi Iley waxay ka mid ahaayeen un mashruucaa. Taasoo jirta hadana kama madhnayn tasarufaadkiisa ku dardarid iyo ka badbadin. Tusaale ahaan; in dadka lagu tuhmo JWXO la soo xidhixhdo oo xabsiga laga buuxiyo waa siyaasadda gumaysiga. Hasa ahaate, iyagoo la soo qaraacay oo dhiig uu ka hoorayo in xabsiga la keeno, ka dibna sii dayntooda lacag fara badan laga qaato waa ka badabadin uu markii dambe ay ka qaadeen Cabdi iley qaar uu ka mid yahay cudurka waalnida ah ee –sadism- oo qofka qaba lagu garto inuu ku raaxaysanayo xanuunka iyo cabaadka ka baxaya dadka uu qaraacayo ama la qaraacayo. Caddaymo badan oo arintaa ku saabsanna waan soo dayn doonaa. In N/hurayaasha CWXO lala dagaalamo oo dalka laga sifeeyo waa siyaasadda gumaysiga, hasa ahaatee in dadka shacabka ah inta la laayo laga dhigo inay ahaayeen ONLF la laayay oo lagu dul dhaanteeyo waa ka badbadin, inkastoo ay midaa qudheeda ka mid tahay rabitaanka gumaysiga oo ah in aan loo kala aaba yeelin dadweynaha gaar ahaan dhalinyarada iyo N/hurayaasha CWXO.
RJ- Tusaale ahaan, maruu isku dayey inuu dagaalka uu kula jiray saxaafada deegaanka lugta kala baxo, iskuna dayo inuu dadka u jiheeyo wuxuu sida weyn u yaqaanay, taasoo ah, inuu dad rayid ah, ama dad uu yidhaahdo wey hubaysnaayeen, oo indhahaa loo shiday, ayaa waxaa dhacday in baadhis Radio Jigjiga sameeyey ay cadaatay inuusan 17 nin dilin, ee hadalkaasi ahaa been abuurkii lagu yaqaanay. Akhri
Cabdi wuxuu soo maray 5an marxaladood oo kala ahaa;
1-Marxaladii is-barashada isaga iyo gumasyiga oo dad badan oo saaxiibadii ahaa uu ku galaafaty.
2-Marxaladii uu sugayay jiritaankiisa tartankana uu kula jiray kuwii ka horeeyay oo iyadana dadweyne farabadan oon waxba galabsan uu ku halaagay.
3-Marxaladii uu fulinayay balantii uu ka qaaday gumaysiga oo waxba uusan ka dhawrsan.
4-Marxaladii uu gumaysiga bilaabay inuu sumcada Cabdi iley dhulka ka soo qaado, ka dib markay hirgali waayeen inuu halganka ku hakiyo mashaariicdii cadaadiska ku dhisnaa ee Cabdi iley uu fulinayay.
5-Markuu dhintay cabdi iley aabihii Meles oo cawradiisii ay u muuqatay caalamka.
Si loo fahmo shaqsigan dambiyada uu ka galay bulshada Somaliyeed oo taariikhda ay waligeed xusi doonto, waxaan isku dayi doonaa inaan marxaladahaa 5ta ah mid walba goonidiisa uga faaloono oo wixii cadayma ah een heli karno aan dadweynaha u soo bandhigno.
Cabdi Iley waa dambiile, qofkii u haysta inuu ONLF dagaal kula jirayna si aad ah ayuu u garab marsan yahay waaqica. Sababtoo ah, Cabdi Iley wuxuu dhab ahaan u tusay dadweynaha S.Ogadenya xumaanta gumaysiga, waxaana hubaal ah inay adkaan lahayd in hadal lagu fahamsiiyo bulshadeena siduu ficil ahaan ugu tusay gumaysi wuxuu yahay. Hadday intaa wanaag u tahay wuu mutaystay.
muuse cabdi says:
aad iyo aad ayaad umahsan tiin walaalayaal waxaan codsanayaa in aad sooraacisaan dhamaan hort joogayaashii gumaysiga ee soomaray ogadeniya wixii aad kaxasuusataa ama taariikh ah